Taorian’ny fanambarana nataony omaly dia niangavy ireo kandida mba hanaja toy ny anakandriamaso ny lalàna mifehy ny fifidianana ny jeneraly Jean Ravelonarivo. Aoka hanaja ny soatoavintsika isika, hoy izy.
Nampahafantarina ampahibemaso omaly tetsy amin’ny CENI Nanisana kosa ny rindram-baiko hampiasaina mandritra izao fihodinana faharoa amin’ny fifidianana izao. Azo antoka, hoy ny filohan’ny vaomieram-pirenena mahaleotena misahana ny fifidianana, Hery Rakotomanana, ity rindram-baiko ity.
Nangingina tsy toy ny tamin’ny fihodinana voalohany ny fampielezankevitr’ireo kandida 2 sisa ho filoham-pirenena hiatrika ny fihodinana faharoa. Hita mihitsy hoe banga kandida 30 isa mahery hafa.